Izilwane – iAfrika
Amaphupho ngezinyoni, izilwane nezinambuzane
Asho ukuthini amaphupho amayelana nezinyoni, izilwane eziphila emanzini nasemhlabeni kanye nezinambuzane? Lokhu kuhlanganisa amajuba, izinkozi, izidleke, izintuthwane, izimpukane, amazeze, amaqhwagi, amasele, izinyoka kanye nezibankwa.
Tags Izilwane, Izinambuzane, Izinyoni
Amaphupho ngezilwane ezifuyiwe nemfuyo
Asho ukuthini amaphupho amayelana nezilwane ezifuyiwe nemfuyo? Lokhu kuhlanganisa amakati, izinja, amahhashi, izinkomo, izimvu, izinkukhu, izimbongolo nezimbuzi.
Tags Izilwane, Izilwane ezifuyiwe, Izimfuyo
Amaphupho ngezilwane zasendle
Asho ukuthini amaphupho amayelana nezilwane zasendle? Lokhu kuhlanganisa izilwane ezidla izintuthwane nomuhlwa, izimfene, amalulwane, izinyamazane, amakameli, izingwenya, izimbila, izindlovu, izimvubu, izimpisi, izingwe, amabhubesi, ochakide, izinkawu, onogwaja, amagundane, izimfudu kanye namadube.
Tags Izilwane, Izilwane zasendle
Amagama abantu asuselwe ezilwaneni
Kule ngosi sixoxa ngomsuka wamagama abantu abaningi besizwe sakwaZulu ababizwa ngawo, amagama asuselwa ezilwaneni. USolwazi ohlonishwa kakhulu, uNobuhle Ndimande uveza ukuthi kubantu abangamaZulu, ukhona umkhuba wokwetha abantwana amagama asuselwe emagameni ezilwane. Ngokuchaza kukaNdimande (2001) empeleni lo mkhuba awugcini kumaZulu kuphela kodwa ukhona kubeNguni, bonke nakwamanye amazwe aseNtshonalanga naseMpumalanga Afrika. Izizathu zalo mkhuba zahlukene ngokwamazwe. UNdimande … Read more
Tags Amagama, Izilwane
Njengabantu abasondelene kakhulu namvelo, izilwane ezithile zasendle zinezincazelo ezithile uma uzibona noma ngithi nje kunezinkolelo ezithile ngazo. Isibonelo nje, kunesilwanyana okuthiwa uChakide, esihlala endle esidume kakhulu ngokudla izinkukhu ekhaya ikakhulukazi uma kuwumuzi ongenazinja. Ziningi-ke izinkoleloze mayelana nale silwanyana, abadala bakholelwa ukuthi ukubona uchakide kwesinye isikhathi kubika inhlanhla kuphinde kubike ishwa, ishobolo lokugcina. Kuthiwa uma uhamba … Read more
Tags Izilwane, Izinkoleloze, izinqomfi, Izinyoni
Ukuphupha ingulube yasendle
Ukuphupha ingulube yasendle kuyefana nokuphupha izimpisi kumbe izinyoka ngoba wonke la maphupho axwayisa ngokuba khona kwesitha empilweni yakho. Ukuphupha ingulube yasendle kuhluke kulawa amanye amaphupho ngokuthi ukuphupha ingulube yasendle kusho ukuba khona kwesitha esesabekayo futhi esiyingozi kakhulu ngenxa yonya leso sitha esinalo.
Tags Izilwane, Izimpisi, Izingulube, Izingulube zasendle, Izinyoka, Izitha
Ufudu yisilwane esaziwa ngokuba yisinokwe uma sihamba futhi siphila isikhathi eside kakhulu kunezinye izilwane eziningi. Kanjalo nasemaphusheni siyibika lobunjalo baso kulokho umuntu asuke ekuzama. Ukuphupha ufudu kuchaza ukuthi lokho ophokophelele ukukufeza ngemizamo yakho, imvamisa okuba yibhizinisi, izithelo zokuzikhandla kwakhko zizoza kancane, kodwa-ke kuyogcina kucacile ngemuva kwesikhathi eside ukuthokozele ukuzikhandla kwakho. Abanye bathi uma uphupha ubona … Read more
Tags Izilwane, Izimfudu
Leli yiphupho elingajabulisi neze. Ukuphupha ingonyama kuyibika lokuthi esikhathini esingeside uzozithola ulinyazwa ngumuntu onamandla kakhulu ngokwesikhundla akusona empilweni yakhe; isibonelo – lowomuntu kungaba yinkosi, yinduna, umongameli. Lezi yizibonelo nje, esimweni somuntu ngomuntu, kuya ngokuthi ngubani onesikhundla esinamandla owenza impilo yalowo ophupha ingonyama ibe engajabulile.
Tags Izilwane, Izingonyama
Uma uphupha ubona ilulwane kuyishwa ngakho kufuneka uqaphele okwesikhashana. Ilulwane yisilwane esimbaxambili, sakheke saba nomzimba wenyoni kepha ikhanda lingelegundwane. Emaphusheni ilulwane lisho ukubakhona komuntu oyixoki ngobumbaxambili kuwena nasetheni zakho. Lomuntu uba muhle uma ephambi kobuso bakho kepha uyingozi ngemva kwakho. Angeke kwambuleleke ukuthi umazi lowomuntu ngokwephupho, kodwa okuyaye kubaluleke yindawo osuke ukuyo wena ophuphayo okuyiyona … Read more
Tags Amalulwane, Izilwane, Izinyoni
Njengokuphupha inyoka, ukuphupha impisi kubika ukuba khona kwesitha esiyingozi kuwena. Lesisitha kusuke kungumuntu omkhonzile kakhulu, wena ozitshela ukuthi ubudlelwano benu naye buhle kakhulu. Kungaba yilunga lomndeni wakho, kungaba ngomunye wabangani bakho, kungaba ngumakhelwane wakho, noma futhi kube ngumuntu osebenza naye – lezi yizibonelo nje ezimbalwa. Uma uphuphe izimpisi ezingaphezu kweyodwa, lokho kuchaza ukuthi kuneqembu labantu … Read more
Tags Izilwane, Izimpisi
Amaphupho ngezilwane ezihuquzela ngezisu
Uma uphupha ubona izilwane ezihuquzela ngezisu kusho ukuthi kunabantu abafuna ukukulimaza.
Tags Izilwane, Izinyoka
Uma uphupha ubona iMamba kusho ukuthi abantu bazohleba futhi basho izinto ezimbi ngawe ngemva kwakho.
Amaphupho ngenyoka ensundu
Uma uphupha ubona inyoka ensundu nokumhlophe kusho ukuthi amadlozi akuthumelela umbiko wokuthi qaphela noma uphawu lokuthi inhlanhla iyeza maduze. Amaphupho ngenyoka emnyama enebala elimhlophe. Amaphupho ngenyoka eluhlaza. Amaphupho ngenyoka.
Uma uphupha ubona imivi kusho ukuthi unezitha ezifisa ukukulimaza. Uma owodwa ukunciza uzobhekana nenkinga ngokushesha kodwa uma uwubulala kusho ukuthi uzophumelela. Amaphupho ngomuhlwa.
Tags Iminyomvu, Izilwane, Izinambuzane
Uma uphupha ubona umuhlwa kusho ukuthi usengozini evela kubantu obucabanga ukuthi ungabethemba. Amaphupho ngomuvi.
Tags Izilwane, Izinambuzane
Uma uphupha ubona isicabucabu noma ulwembu lwesicabucabu kusho ukuthi kunezinto ezinhle eziza kuwena. Uzothola imali obungayilindele noma othile uzokuvakashela maduze.
Tags Izicabucabu, Izilwane
Uma uphupha ubona iminenke kusho ukuthi uyophumelela kodwa kuyothatha isikhathi ukuba ubone imiphumela yomsebenzi wakho.
Tags Iminenke, Izilwane
Uma uphupha ubona inkalankala kusho ukuthi ishwa lisendleleni liza kuwena ikakhulukazi uma kungekudala unohambo ngaphezu kwamanzi.
Uma uphupha ubona idube kusho ukuthi kufanele uzinakekele kungenjalo uzogula.
Tags Amadube, Izilwane, Izinyamazane
Uma uphupha ubona unogwaja kuyishwa uma umnyama futhi kuyishwa kakhulu uma ungena ekhaya lakho. Uma kuwunogwaja omhlophe kodwa uyokwehlelelwa izinto ezinhle.
Tags Izilwane, Onogwaja